FARRIINTA FOORE: Wasaaradda maaliyadda iyo waayaheeda | isbeddel
← Sirta SSC Heshay: Been Casriyaysan!
Book Review: No More Lies About Africa →
FARRIINTA FOORE: Wasaaradda maaliyadda iyo waayaheeda
Tuesday, 01 March 2011 16:45
Ujeeddadu ma ahan in la dhaliilo, waase in la tilmaamo. Dhibaatooyinka hor taagan waxa ka mid ah shaqaale daalay oo ay ku yartahay aqoonta maamul lacageed, dhaqaalaha soo gala yar yahay,wax farafarayna u bartay. Wasaaraddiisu haddii uu doonayo inay horumarto waa inuu hawlgeliyo dad aqoon durugsan u leh cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda oo daraasad buuxda ku sameeya nidaamka maamul iyo dakhli abuur ee wasaaradda. Dkhligu ma aha oo keliya cashuur kordhin, waxase badan in awood loo yeesho soo ururinta cashuurta baaqata iyo abuurka ilo dakhli. Taas weeye ta ay ka caawin karaan dad aqoontaa takhasus u leh oo uu qaato. Wuu heli karaa khubaro caynkaas ah. Khubaradaa waxa dhaqaalahooga ka caawin kara hay’adaha caalamiga ah oo lataliyayaal waddani ah ula diyaar ah, kuwo tabbarruc ahna wuu heli karaa.
Waxa kale oo looga baahan yahay in uu dadka baro in wasaaradda maaliyaddu aanay ahayn meel lacagtu fadhfadhido balse ay tahay meel habaysa dakhliga dalka soo gala. Sidoo kale wasaaraddu waa in ay wada shaqayn la samayso laamaha kale ee dawladda. Waxa jirta aragtid qaldan oo meel martay, taas oo ka dhigaysa wasaaradda maaliyaddu in ay tahay meesha ugu muhiimsan dalka. Runtuna sidaa way ka duwan tahay. Waxa u soo hugurooda uun nin hunguri doon ah. Xagga horumarinta bulshada waxa ka muhiimsan wasaaradda waxbarashada oo ah ta soo saarta aqoonyahanka iyo aayaha dalka, wasaaradda caddaaladaa iyo wasaaradda caafimaadka.
Mar haddii wasaaradda maaliyaddu noqotay meel loo soo hunguri doonto, waxa hubaal ah in wasiirkan joogaana iskaga carari doono, kuwa yimaaddaana ay ka dhigi doonaan meel aan cidi lahayn oo waxa soo gala la iska qaato dabadeedna oohintu halkeedii ka socoto.
Wasiirow la tasho dadka, shaqaalahaaga la shaqee si ay kuula shaqeeyaan, ururso aqoonyahanka cilmiga maaliyadda iyo dhaqaalaha yaqaan, hana noqon kelidii-yaqaan illayn sheekadu way dhaaftay intii kalkulaytarku (calculator) garanayee.
Horto wasiirku aqoon injineernimo iyo waayo aragnimo muddo dheer ah oo ballaadhan wuu leeyahay. Guryo wanaagsan wuu dhisi karaa, dad wanaagsan inuu dhisi karose loogama baran. Lacagta wuu ururin karaa, waanu ilaalin karaa laakiin inuu abuuri karo mooyi. Daacadnimo iyo dadaal waa loogu xilan karaa, dulqaad iyo dad la tashise mooyi.
Posted by Warfaa on Maarso 26, 2011 in Uncategorized